Kheyre oo wada-hadal dhinaca telefonka ah la yeeshay Wasiir ka tirsan Ruushka – Geelle Magazine
Kheyre oo wada-hadal dhinaca telefonka ah la yeeshay Wasiir ka tirsan Ruushka
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xassan Cali Kheyre ayaa xalay wada-hadallo dhinaca qadka taleefonka ah waxaa uu la yeeshay Wasiirka Arrimaha dibada dalka Ruushka Sergey Lavrov.
Kheyre ayaa Wasiirka Arrimaha Dibadda dalka Ruushka ka codsaday in gacan laga siiyo la dagaalanka Cudurka Covid 19 oo iminka gaaray 237 qof. sida uu bogiisa Twitter-ka ku daabacay Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya.
“Waxaan wada-hadal muhiim ah la yeeshay Wasiirka Arimaha Dibadda Ruushka H.E Sergey Lavrov. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga wada hadlay waxaa ka mid ah xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed iyo iskaashi ku aadan dadaallada lagu xakameynayo Covid19 oo masiibada” ayuu yiri Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya.
Wasiirka Arrimaha Dibadda dalkaasi Ruushka ayaa balan qaaday inuu soo dirayo qalab iyo dhaqaatiir caafimaad maalmaha soo socdo si ay Soomaaliya uga caawiyaan dagaalka lagula jiro Coronavirus iyo sidii looga hortegi lahaa faafitaanka Cudurka Covid 19.
Qofkii ugu horreeyey ee Soomaali ah oo Covid 19 ugu geeriyoodey dalka Koonfur Afrika